Iindaba - Inkcazo yeanesthesia
Inkcazo yomatshini wokubulala iintlungu kukwenza umzimba wesigulana okanye inxenye yexeshana ilahlekelwe yimvakalelo yentlungu. Inkcazo epheleleyo kukwenza ukuba umzimba wesigulana okanye inxenye yakhe iphulukane nengqondo okwethutyana kunye nengqondo nangayiphi na indlela, ukwamkela unyango oluqhaqho kakuhle, kunye nokukhawulezisa nokubuyisela ngokupheleleyo intuition kunye ne-reflex yokuqala emva kotyando.
I-Anesthesia yahlulwe yenziwa nge-anesthesia ngokubanzi kunye ne-anesthesia engaqhelekanga (i-anesthesia yendawo).
I-anesthesia ngokubanzi luphawu lokuthintela ubuchopho, ukulahleka ngokupheleleyo, izigulana azipheleli tu kwintlungu, nokuba zoyika, ukudinwa kunye nokungonwabi kuya kulahleka, kwaye isigulana asinayo nayiphi na into ngokuzithandela okanye ngokunganyanzelekanga, oko kukuthi, abaguli kwinkqubo yotyando, utyando aluyi kuba nayo nayiphi na impendulo okanye ifuthe. Ngenxa yokuba abaguli bengenalo uluvo kunye nengqondo ehambelana nokusebenza, ngamanye amaxesha ngenxa yoku, oogqirha abanako ukunxibelelana nezigulana, abaguli abanakho ukugcina imisebenzi yabo yomzimba, eya kuthi izise umngcipheko othile kwizigulana.
Indlela yokubulala iintlungu ngokubanzi ine-anesthesia yomthetho wokuphefumla kunye nomthetho wenaliti ye-anesthesia ngokubanzi iintlobo ezimbini.
Ukuthomalalisa i-anesthesia kubandakanya ukuphefumla umxube weegesi (ukuqinisekisa uxinzelelo oluthile lweoksijini) ukunika isigulana ukubulawa okuqhelekileyo.
I-anesthesia engenakulinganiswa yinaliti ye-anesthetic engamanzi emzimbeni ukunika i-anesthetic jikelele.
I-anesthesia ye-inhalation kunye ne-anesthesia yenaliti, i-anesthesia ye-inhalation iphakame kakhulu kunabanye, kuba ngexesha le-inhalation anesthesia, umxube we-anesthesia we-inhalation yegesi nayo inomphunga, i-anesthesiologist inokuhlengahlengisa uxinzelelo lwe-anesthesia yegesi yomxube nangaliphi na ixesha, ukuze utshintshe ubunzulu be-anesthesia. Xa ufaka i-anesthesia, akukho lula ukutshintsha ubunzulu be-anesthesia. Ukuba i-anesthesia inzulu kakhulu okanye ayinzulu kakhulu, ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ayizukuchaphazela kuphela ukusebenza, kodwa ikwayingozi yobomi. Ke ngoku, i-anesthesia ngokubanzi esetyenziswa ezibhedlele ikakhulu i-inhalation anesthesia.
Ixesha Post: Apr-13-2021